Vaovao - Inona no hotadiavina amin'ny Monitor an'ny Gaming
Inona no hotadiavina amin'ny Monitor an'ny Gaming
Ny Gamers, indrindra ireo mafy orina, dia olona feno fandinihana, indrindra raha ny fakana ny monitor tonga lafatra ho an'ny milalao lalao. Ka inona no tadiavin'izy ireo rehefa miantsena?
Size sy fanapahan-kevitra
Ireo lafiny roa ireo dia miara-miasa ary saika ireo foana no dinihina alohan'ny fividianana monitor. Ny efijery lehibe kokoa dia azo antoka fa tsara kokoa rehefa miresaka momba ny lalao ianao. Raha avelan'ny efi-trano izany dia safidio ny 27-incher hanome trano sy fananana be dia be ho an'ireo sary manaitra maso ireo.
Saingy ny efijery lehibe dia tsy ho tsara raha toa ka misy fanapahan-keviny ratsy. Mikendry farafahakeliny farafahakeliny efijery feno HD (famaritana avo) miaraka amin'ny famahana farany 1920 x 1080 teboka. Misy mpanara-maso vaovao vaovao 27-inch manome Wide Quad High Definition (WQHD) na 2560 x 1440 teboka. Raha manohana ny WQHD ny lalao sy ny lalaovin'ny filalaovana anao dia ho voatsabo amin'ny sary tsaratsara kokoa noho ny HD feno ianao. Raha tsy olana ny vola dia azonao atao ny mandeha amin'ny Ultra High Definition (UHD) manome 3840 x 2160 teboka voninahitra sary. Azonao atao ihany koa ny misafidy eo amin'ny efijery miaraka amin'ny tahan'ny 16: 9 sy ny iray amin'ny 21: 9.
Refresh Rate sy valiny Pixel
Ny tahan'ny fanavaozana dia impiry ny mpanara-maso iray manamboatra ny efijery ao anatin'ny iray segondra. Izy io dia refesina amin'ny Hertz (Hz) ary ny isa ambony dia midika sary tsy dia manjavozavo loatra. Ny ankamaroan'ny mpanara-maso amin'ny fampiasana iraisana dia nomena isa 60Hz izay tsara raha manao birao fotsiny ianao. Ny lalao dia mitaky farafaharatsiny 120Hz raha te hamaly ny sary haingana kokoa ary ilaina izany raha mikasa ny hanao lalao 3D ianao. Azonao atao ihany koa ny misafidy mpanara-maso miaraka amin'ny G-Sync sy FreeSync izay manolotra ny fampifanarahana amin'ny karatra sary an-tserasera mba hahafahan'ny tahan-tsafidy miovaovaova kokoa ho an'ny lalao gaming milamina kokoa. Ny G-Sync dia mitaky karatra sary miorina amin'ny Nvidia raha FreeSync kosa dia tohanan'ny AMD.
Ny valin'ny pixel an'ny monitor dia ny fotoana ahafahan'ny pixel mifindra amin'ny mainty ka hatramin'ny fotsy na amin'ny aloky ny volondavenona mankany amin'ny iray hafa. Izy io dia refesina amin'ny milliseconds ary ny ambany ny isa no haingana kokoa dia ny valin'ny pixel. Ny valinteny piksela haingana dia manampy amin'ny fampihenana ireo pixel matoatoa ateraky ny sary mihetsika haingana aseho amin'ny monitor izay mitondra mankany amin'ny sary malama kokoa. Ny valinteny pixel mety indrindra amin'ny filalaovana dia 2 milliseconds fa 4 milliseconds tokony ho tsara.
Teknolojia tontonana, fampidirana horonan-tsary, sns
Ny takelaka twisted Nematic na TN no mora vidy indrindra ary manolotra taham-pahavitrihana haingana sy valin'ny pixel izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny lalao. Na izany aza tsy manome zoro fijerena malalaka izy ireo. Fananganana Vertical Alignment na VA ary In-Plane Switching (IPS) dia mety hanolotra fifanoherana avo lenta, loko marevaka ary zoro fahitana mivelatra nefa mora tohina amin'ny sary matoatoa sy ny zavakanto mihetsika.
Ny monitor miaraka amina fampidirana horonan-tsary marobe dia mety raha mampiasa endrika filalaovana marobe toy ny console sy PC ianao. Seranana HDMI marobe dia tsara raha mila mifanakalo eo anelanelan'ny loharanom-pahalalana marobe toa ny teatra an-tranonao ianao, ny konsolanao amin'ny lalao, na ny riganao. Misy ihany koa ny DisplayPort raha toa ka manohana ny G-Sync na FreeSync ny monitor anao.
Ny mpanara-maso sasany dia manana seranana USB ho an'ny filalaovana sarimihetsika mivantana ary koa mpandahateny miaraka amin'ny subwoofer ho an'ny rafitra filalaovana feno kokoa.
Inona ny haben'ny monitor amin'ny solosaina no tsara indrindra?
Miankina be amin'ilay vahaolana tadiavinao sy ny habaka birao anananao io. Na dia toa tsara kokoa aza ny mijery ny lehibe kokoa, manome anao toerana malalaka ho an'ny asa sy sary lehibe kokoa ho an'ny lalao sy horonan-tsary, afaka mamoaka ny fehin-kevitra momba ny fidirana toa ny 1080p ka hatramin'ny fetran'ny hazavany. Ny efijery lehibe koa dia mitaky toerana bebe kokoa eo amin'ny latabatrao, koa mitandrina izahay amin'ny fividianana ultrawide goavambe toa ny JM34-WQHD100HZ ao amin'ny lisitry ny vokatra raha miasa na milalao amin'ny latabatra lehibe ianao.
Raha fehezina haingana, dia toa 24 santimetatra eo ho eo ny 1080p, raha 1440p kosa dia toa 30 sm mahery ary mihoatra ny 30 santimetatra. Izahay dia tsy hanome soso-kevitra ny efijery 4K izay kely kokoa noho ny 27 santimetatra satria tsy ho hitanao ny tena tombony azo amin'ireo piksela fanampiny amin'ny toerana somary kely amin'io famahana io.
Ny mpanara-maso 4K ve tsara amin'ny lalao?
Afaka ny ho izy ireo. 4K dia manolotra ny tampon'ny antsipirian'ny lalao ary amin'ny lalao atmosfera dia afaka manome anao fidirana anaty rano vaovao, indrindra amin'ny fampisehoana lehibe kokoa izay afaka mampiseho tanteraka an'io mason'ireo piksel io amin'ny voninahiny rehetra. Ireto fampisehoana avo lenta ireto dia tena milalao amin'ny lalao izay tsy dia manandanja loatra toy ny fahadiovan'ny maso ny tahan'ny refy. Izany dia nilaza fa mahatsapa izahay fa ny mpanara-maso ny tahan'ny famerenana amin'ny laoniny dia afaka manome traikefa tsara kokoa (indrindra amin'ny lalao haingam-pandeha toy ny mpitifitra), ary raha tsy manana ny paosinao lalina ianao hanaparitaka karatra sary mahery na roa koa, tsy izany ianao. hahazo ireo taham-bidy ireo amin'ny 4K. A 27-inch, 1440p mampiseho mbola ilay toerana mamy.
Aza adino koa ny fahombiazan'ny fanaraha-maso dia matetika mifandray amin'ny teknolojia fitantanana framerate toy ny FreeSync sy G-Sync, koa tandremo ireo teknolojia ireo sy karatra sary mifanentana rehefa mandray fanapahan-kevitra momba ny lalao. FreeSync dia ho an'ny karatra sary AMD, raha ny G-Sync kosa dia tsy miasa afa-tsy amin'ny GPU an'ny Nvidia.
Iza no tsara kokoa: LCD sa LED?
Ny valiny fohy dia mitovy izy roa. Ny valiny lava kokoa dia ny tsy fahombiazan'ny marketing amin'ny orinasa amin'ny fampitana araka ny tokony ho izy ny vokariny. Androany ny ankamaroan'ny mpanara-maso mampiasa ny haitao LCD dia miverina miverina amin'ny LED, ka mazàna raha mividy monitor ianao dia fampisehoana LCD sy LED izany. Ho an'ny fanazavana bebe kokoa momba ny teknolojia LCD sy LED, manana torolàlana iray natokana ho azy izahay.
Izany dia nilaza fa misy fampisehoana OLED hodinihina, na dia mbola tsy nisy fiatraikany teo amin'ny tsenan'ny birao aza ireo takelaka ireo. Ny efijery OLED dia manambatra ny loko sy ny hazavana amin'ny tontonana tokana, malaza noho ny loko marevaka sy ny tahan'ny fifanoherana. Raha io teknolojia io dia nanao onja tamin'ny fahitalavitra nandritra ny taona vitsivitsy izao, vao manomboka ny manao dingana ambadika mankany amin'ny tontolon'ny mpanara-maso ny birao.
Inona no karazana monitor mety indrindra amin'ny masonao?
Raha mijaly amin'ny fihenan'ny masonao ianao dia mitadiava mpanara-maso izay manana rindrambaiko sivana namboarina, indrindra ireo sivana izay natao manokana hanalefaka ny olan'ny maso. Ireo sivana ireo dia natao hanakanana jiro manga kokoa, izay ampahany amin'ny fikajiana izay misy fiatraikany amin'ny masontsika indrindra ary tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny olan'ny maso. Na izany aza, azonao atao ihany koa ny maka ny rindranasa rindrambaiko sivana maso amin'ny karazana monitor azonao